SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA WHOODLE, DOGS HYBRID TERRIER POODLE, PEJY 1 - ALIKA
Sary momba ny fiompiana alika Whoodle, Dogs hybrid Terrier Poodle, pejy 1
Alika malefaka mifangaro varimbazaha mifangaro / Poodle mifangaro malefaka
'Ozzy dia Mini Whoodle. 5 volana izy ary milanja 10 pounds. Ny reniny dia a Terateran'ny Wheaten Tery malefaka ary ny dadany dia a Poodle kely . Manana toetra milamina izy, be fitiavana amin'ny alika sy olona hafa ary mampihomehy. Haingana koa izy hianatra fika vaovao. Ny volony dia malefaka sy marefo. Noraisinay izy avy tao amin'ny Old McDoodle Farm tany Osteen, FL, ary tsy afaka nifaly niaraka taminy. '
Noa the Whoodle (Soft Coated Wheaten Terrier / Poodle hybrid) amin'ny 5 volana
Noa the Whoodle (Soft Coated Wheaten Terrier / Poodle hybrid) 5 taona nilalao tamin'ny lanezy
Noa the Whoodle (alika malemy mifono Wheater Terrier / Poodle mifangaro alika) amin'ny 5 volana nilalao ny lanezy
Noa the Whoodle (Alika mifangaro Wheaten Terrier / Poodle mifangaro alika) amin'ny 8 volana
'Ity i Mousse ary tamin'ity sary ity dia 2 taona izy. Voamarina fa voan'ny Canine Lymphoma tampoka i Mousse tamin'ny 4 febroary. Tamin'ny fotoana nahitanay an'io aretina io dia efa nisy fiantraikany tamin'ny rafi-pitabatabana sy ny hazondamosiny io ka tapaka ny fanapahan-kevitra ary navotsako izy tamin'ny 9:20 maraina tamin'ny 16 febroary 2010.
'Mousse dia zazalahy tsara tarehy sy lehibe ary milanja 70 lbs. Ao amin'ny sary mifatotra dia misy sariny mipetraka eo am-baravarankely, fialamboly tiany indrindra. Tovolahy tsara tarehy izy nanana ny toetrany tsy mbola hitako hafa. Vaky ny foko fa feno fankasitrahana aho fa efa roa taona niarahana tamin'ny zanako. Tsy afaka nisaraka izahay rehefa niasa tao an-trano aho, mba azonao an-tsaina ny fahabangana rehefa nesorina tamiko izy.
'Nanangana zanak'alika kely Goldendoodle antsoina hoe River izahay ary na dia tsy Mousse aza izy dia mitondra haingana any amin'ny fianakaviana ary mahatsapa fa voatahy manana azy ho mpikambana ao amin'ny fianakavianay.'
inona no antsoina hoe alika oram-panala
Mousse the Whoodle
'Roscoe the Whoodle amin'ny faha-12 herinandro - ity no sariny nandro voalohany. Alika tsara toetra izy izay tia ny olon-drehetra ary mora fampiofanana. Tena mahatsikaiky izy ary feno toetra nefa malefaka be. koa. '
Roscoe the Whoodle amin'ny 12 herinandro
Kassie the Whoodle puppy amin'ny faha-3 volana— 'Tena mamy sy marani-tsaina izy.'
'Ireto dia Mini Whoodle pups amin'ny 4 herinandro eo ho eo. Neny dia Soft Coated Wheaten raim-pianakaviana dia Mini Poodle. Samy hafa loko izy ireo. ' Sary natolotry ny Diamonddoodles
Max ny olon-dehibe Whoodle hybrid (Soft Coated Wheaten Terrier / Poodle mix dog) amin'ny 2 taona
Cocker spaniel retriever volamena Mix amidy
'Max the Whoodle tamin'ny faha-3 taonany - nohaingoinay Mohawk izy.'
Max the Whoodle amin'ny faha-3 taonany miaraka amin'ny Mohawk
Alika kely Whoodle amin'ny 3 volana
Zilla, ilay alika mifangaro Wheaton / Poodle mifangaro (Whoodle) amin'ny 10 volana
'Lilly dia 50-lb. Whoodle (Soft Coated Wheaten Terrier / Standard Poodle) amin'ny 1½ taona. Ny ray aman-dreny dia 35 lbs. Ny volony dia malefaka tsy mampino ary lasa toy ny dreadlocks raha avela hitombo. Mametaka azy indray mandeha isan-taona izahay. Tena sariaka izy ary tia alika hafa. Fotsy izy miaraka amina kitrokely apricot ao an-damosiny. '
Jake the Whoodle (hazo fijaliana Wheaten Terrier / Miniature Poodle) amin'ny 2 taona— 'Izy no alika be fitiavana indrindra eto an-tany ary te hilalao na inona na inona (biby na olombelona!) Amin'ny fotoana rehetra. Ny rambony tsy mitsahatra mihodina! '
Jake the Whoodle (hazo fijaliana Wheaten Terrier / Miniature Poodle) ho alika kely
Gracie the Whoodle (Wheaten / Poodle mix)
mpiandry alemanina ary mixer malamute any Alaska
Lisitry ny alika malefaka mifangaro varimbazaha mifangaro vy
Zavatra Amerikana Cocker spaniel Mix
sary mifangaro bokikely pitbull mifangaro
pyrenees lehibe sy retriever volamena
ohatrinona ny faritra ac ho an'ny alika?
mixer boxer sy border collie